Ciidanka Jubbaland oo dekedda Kismaayo ku qabtay Markab ganacsi oo hub ka buuxa – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Ciidanka Jubbaland oo dekedda Kismaayo ku qabtay Markab ganacsi oo hub ka buuxa
Wararka naga soo gaarayo magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in dekadda magaaladaasi lagu qabtay markab ganacsi ah oo uu saarnaa hub, kaas oo ay gacanta ku dhigeen ciidanka maamulka Jubbaland.
Mas’uuliyiinta maamulka Jubaland oo aynu qadka teleefanka kula xiriirnay ayaa inoo xaqiijiyay in dekedda Kismaayo ay maalintii Axadda ahayd ka qabteen Markab nooca ganacsiga ah oo ay saaran yihiin hub badan.
Hubka saaran Markabka ayaa la sheegay in lagu dhex qariyay Bagaash uu siday markabka, kaas oo markii danbe la ogaaday kadib markii shaqaalaha muruq-maalka ee dejinayay markabka ay ka shakiyeen.
Markabkaasi ayaa la sheegayaa inuu u rarnaa nin ganacsade caan ah oo lagu magacaabo Cabdi Jamaal, kaas oo deegaan ahaan kasoo jeeda Puntland.
Illaa iyo haatan lama oga uljeedka hubka lagu qariyay Markabka iyo cidda loo waday, waxaana haatan socda baaritaano ay saraakiisha ciidanka maamulka Jubbaland ku ogaanayaan meesha hubkaasi loo waday.
Ugu dambeyntii, saraakiisha ciidamada Jubbaland ayaa warbaahinta Bulshoweyn u sheegay in dhawaan ay saxaafadda usoo bandhigi doonaan hubka ay ka qabteen dekedda magaalada Kismaayo, islamarkaana ay warbixin dheeraad ah kasoo saari doonaan kadib markii ay soo gaba-gabeeyaan baaritaanka.